ko htike's prosaic collection: Myanmar Association Thingyan
Myanmar Association Thingyan
မြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး (London) မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာများ ဦးစီးတည်ထောင်သည့် မြန်မာအသင်းကြီး (ယူကေ)မှ ကြီးမှုး၍ လန်ဒန်မြို့ သိမ်းမြစ်(Thames River)ထဲတွင် အပျော်ခရီး သင်္ဘောစီးမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို အချိန်၊ ဒီလို အခါမျိုးတွင် မြန်မာလူမျိုးများ မည်သို့သော နှလုံးသားများဖြင့် အပျော်သက်သက် ခရီးထွက် အပန်းဖြေနိုင်သည်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါသည်။ ခရီး အစီအစဉ်ကို အောက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Myanmar Association Thingyan """Myanmar Association Boat cruise 2008""""
?Enjoy sight seeing while listening to the music with free Monhinga???
Date Sunday 15th June 2008
Time 1200hr (boarding time 1130hrs)
Meeting point Westminster pier
opposite Westmister station /Big ben
Tube Westminster station
Tickets � 10
(All inclusive boat ride-Monhinga-Karaoke music)
Artist Tin Zar maw et al
Tickets/places are limited
Boat capacity 240
Tickets are mandatory for boarding
Be prompt on arrival for boarding
Enjoy and hope to see you ALL!!!!!!!!
Enlargeable/downloadable photos at
Posted by ကိုထိုက် at 20:25
This is outright disgusting. What kind of human beings are in charge of Burma. Have they got no respect for the millions starving and hundreds of thousands dead?